चितवनमा ८३ एचआइभी संक्रमित
निशान न्युज मंसिर १५, 2074
चितवन । सन् २०१७ को ११ महिनामा जिल्लामा १५ हजार ४५० जनाले एचआइभी परीक्षण गराएका छन् ।
परिक्षण गराएकामध्ये ८३ जनामा एचाआइभी संक्रमण देखा परेको छ । भरतपुर अस्पतालभित्र रहेको एएचएफ नेपालका वरिष्ठ क्षेत्रीय संयोजक कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार सन् २०१७ मा भरतपुर अस्पतालको एआरटी सेन्टरमा १४ हजार ३ सय जनाले एचआइभी परीक्षण गराएका हुन् ।
समुदायमा गरिएका कार्यक्रममा १ हजार १५० जनाले एचआइभी परीक्षण गराएको उनले बताए । सन् २०१६ मा जिल्लामा १५ हजार २२८ जनाले एचआइभी परीक्षण गराएका थिए भने ६९ जनामा संक्रमण भेटिएको सापकोटाले बताए ।
भरतपुर अस्पतालका एआरटी सेन्टरका डा. उन्नत श्रेष्ठका अनुसार एचआइभी भएको शंका लाग्ने बित्तिकै अस्पताल आउनेको संख्या बढेको छ । संक्रमित पनि खुलेर आउन थालेका छन् । अहिले भरतपुर अस्पतालमा एआरटी सेवा लिने संक्रमित ७६४ जना रहेका छन् ।
सो सेवा लिनेमा पुरुष ३३६, महिला ३६३ र ६५ बालबालिका रहेका छन् । एक सय ३५ जना नयाँ संक्रमितले औषधि सेवन गर्न थालेका छन् । भरतपुर अस्पतालमा सम्पर्कमा रहेकामध्ये पछिल्लो एक वर्षमा ११ पुरुष र छ महिलाको मृत्यु भएको छ ।
यसैबीच चितवनमा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’ नाराका साथ ३०औँ विश्व एड्स दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइदै छ । भरतपुर अस्पताल, एएचएफ नेपालको आयोजना र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भरतपुरको सहयोगमा विश्व एड्स दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउन लागिएको हो ।
काठमाडौं । उफ् ! डन्डिफोरले हैरान पार्‍यो, धेरै युवा–युवती ओँठ लेप्य्राउँदै पीडा पोख्छन् । टिनेजर...
के तपाई बढि रिसाउनुहुन्छ ? सचेत रहनुस हृदयघात हुन सक्छ
काठमाडौं । हामीले बच्चादेखि नै सुन्दै आएका छौं, रिस मानिसको सबैभन्दा ठूलो सत्रु हो र यसले आफैलाई ...
के तपाई कागती पानी पिउनुहुन्छ ? यस्ता सकारात्मक पक्ष
काठमाडौं । केही सामान्य परिवर्तनले तपाईंको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । जीवनशैलीमा स...
काठमाडौं । पछिल्लो समय यौनजीवनका बारेमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । भर्खरै मात्र एउटा अन...
डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यू भएको आरोप, आकस्मिक कक्षमा भयो झडप
सुनसरी । प्रकाशपुरबाट गाडीले दुवै खुट्टा किचेर धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठ...
खुल्यो चिकित्सकहरुको साझा संस्था
काठमाडौं । चिकित्सकहरुको साझा संस्था युनाईटेड नेशनल मेडिकल सोसाईटी अफ नेपालको बिधिवत रुपमा उद्घाट...